Fomba 10 hampitomboana ny fomba fijerinao amin'ny paikadin'ny votoatinao | Martech Zone
Fomba 10 hampitomboana ny fomba fijerinao amin'ny paikadin'ny votoatinao
Zoma Janoary 2, 2015 Douglas Karr
Tsy maharitra ny torohevitra tsara ary koa ny fampahalalana amin'ity sary ity. Diana Adams avy amin'ny BitRebels dia nametraka lisitra iray Fomba 10 hampihenana ny fomba fijerin'ny pejy amin'ny hafatrao ary NowSourcing namadika azy ho infographic mahafinaritra.
Mahitsy ny torohevitra:
Mametraha votoaty tsara matetika (eny, fantatro fa niaraka tamin'ny fialantsasatra izahay).
Ataovy azo zaraina ny hafatrao - tianay Mizara ara-tsosialy mora ho an'ny WordPress!
Mampiasà fitaovana ho an'ny famoronana atiny - manana fanairana fampandrenesana amina lohahevitra maromaro izahay amin'ny alàlan'ny Meltwater ary tena tia ny halaliny sy ny faharetan'ireo fampahalalana azontsika zaraina.
Ekeo ny mpanoratra mpanoratra - but TANDREMO!
SEO - Search Engine Optimization dia mbola zava-dehibe fa aza atao tara loatra. Eto dia dingana ataontsika hanatsarana ny lahatsoratray.
Manova & manaporofo ny teny rehetra alohan'ny hamoahana azy - Oad… tsy mahomby isika eto. Nahazo doozy roa aho tamin'ny lahatsoratro farany izay namboariko. Izahay dia nilalao ilay hevitra hoe hanana mpamoaka lahatsoratra, angamba amin'ity taona ity!
Fananganana rohy (Fa tsy araka ny eritreritrao) - Tiako ilay teny fahazoana rohy avy amin'ny Paikady momba ny tranokala. Mifanakalo hevitra momba ny rohy anatiny mifandraika izy ireo handrisihana fomba fijery pejy bebe kokoa - tianay Jetpack's fandefasana hafatra mifandraika amin'izany!
Marketing amin'ny mailaka ny làlana mety - izany no antony nanorenanay sy nampiasainay CircuPress!
Manapaha lahatsoratra lava - Mila manao bebe kokoa amin'ireny isika fa raha ny marina, dia halako ireo lahatsoratra tsindrio 10+ izay mitondra fijery pejy fotsiny ary mahasosotra ireo mpamaky anao.
Mampiasà haino aman-jery sosialy - Raha manam-potoana bebe kokoa izahay, dia tena hiasa amin'ny sary asongadin-tsarimihetsika tsara kokoa ho an'ny lahatsoratray ary hampiasa tsara ny outlet sosialy tsirairay avy.
Tags: fanatsarana ny bilaogybilaogy Lahatsoratrakofehycurationbokotra fizarana mora ara-tsosialymailaka Marketingmpanoratra mpanoratraampitomboy ny pejyrohy-tranolahatsoratra lavalahatsoratra matetikalahatsoratra mifandraikaSEOazo zarainahaino aman-jery sosialy
Mampitaha ny LinkedIn amin'ny tambajotra fandraharahana ve ny Facebook?
Maninona ny Infografika no tsy maintsy atao amin'ny marketing amin'ny atiny
Dec 1, 2015 amin'ny 8: 06 AM
Ity dia infographic tena tsara. Misaotra nizara azy Doug!
Raha ny fahitako azy dia misy fomba roa hampitomboana ny fomba fijery pejy ao amin'ny tranonkala iray:
Fomba malalaka (fahazoana mpitsidika vaovao).
Fomba mahery: mitaona ny mpamaky efa misy hamaky bebe kokoa (fanatsarana ny pejy / fizarana
Vao haingana izahay namoaka lahatsoratra izay mifantoka amin'ny "fomba mahery", misy toro-hevitra azo ampiharina.
Mieritreritra aho fa tokony hamadika an'ity lahatsoratra ity ho infographic. 🙂
Dec 1, 2015 amin'ny 8: 28 AM
Heveriko fa izany no atiny mendrika infographic, Tamas!